Fanontaniana matetika: Inona no sambo mpiady matanjaka indrindra naorina? - Ilay lehibe indrindra
Inona ny sambo mpiady mahery indrindra eto an-tany?
Inona ny sambo mpiady matanjaka indrindra naorina hatrizay?
Inona no sambo mpiady haingana indrindra naorina?
Inona no sambo mpiady amerikana lehibe indrindra naorina?
Inona ny sambo mpiady natahorana indrindra?
Iza amin'ireo sambo no rendrika amin'ny sambo betsaka ao ww2?
Nilentika sambo ve ny USS Iowa?
Inona ny sambo mpiady mandroso indrindra eto an-tany?
Inona ny sambo mpiady haingana?
Inona no mpitatitra fiaramanidina haingana indrindra?
Moa ve lehibe kokoa noho i Bismarck ny Tirpitz?
Mbola misy sambo mpiady britanika tavela ve?
Nisy sambo nilentika ve i Yamato?
Inona ny sambo mpiady malaza indrindra?
Nilentika ve ny USS Montana?
Izy sy ny sambo rahavaviny, Musashi, no sambo mpiady mahery indrindra sy mahery vaika indrindra namboarina, namindra 72,800 46 taonina feno entana ary nirongo basy lehibe 18.1 sm (94 in) Type XNUMX, izay basy lehibe indrindra nitaingina sambo mpiady. .
Yamato, miaraka amin'ny mitovy kilasy aminy Musashi, no ady mahery vaika indrindra sy mahery vaika indrindra hitan'izao tontolo izao. Nahazo famindran-toerana 72,800 94 taonina izy tamin'ny famatrarana betsaka indrindra. Ary koa, ny basiny Type XNUMX no lehibe indrindra nitaingina sambo mpiady.
Kilasy Yamato (71,659 XNUMX lava lava)
Amin'ny maha-sambo mpiady natokana ho lehibe kokoa sy matanjaka noho ny hafa rehetra, dia tsy tokony hahagaga raha manjaka tampoka ny kilasin'i Yamato ho toy ny sambo mpiady lehibe indrindra naorina.
Ny sambo mpiady US-Iowa kilasy dia nampandehanan'ireo vovon-tsolika valo sy paositra efatra, izay nitondra 212,000 tora-tsoavaly. Tamin'ny 1968, nandritra ny fitsangantsanganana an-dranomasina nilentika, ny USS New Jersey kilasy Iowa dia nahatratra 35.2 km / h ny hafainganam-pandeha naharitra enina ora.
Jereo ihany koa Fanontaniana matetika: Aiza ny toeram-pitrandrahana lehibe indrindra eto an-tany?
Kilasy sy karazany: Sambo mpiady kilasy Iowa
famindran-toerana: Fenitra: 48,110 taonina lava (48,880 t) entana feno: 57,540 taonina lava (58,460 t)
Length: 887 metatra 3 santimetatra (270.4 m) loa
Ny USS Missouri an'ny tafika an-dranomasina no ady an-trano mampidi-doza indrindra hatrizay. Hevi-dehibe: ny endrik'ireo sambo mpiady amerikana farany dia nampifangaro ny fahamendrehana mahatsiravina miaraka amin'ny hatsarana mahafinaritra. Ny sambo mpiady amin'ny North Carolina– sy South Dakota – dia noforonina tamin'ny fetran'ny Fifanarahana Naval Washington izay ao an-tsaina.
Sambo 33 no nilentika, ny USS Tang nilentika ny fandefasana taonina betsaka indrindra tamin'ny Ady lehibe II ho an'i Etazonia. Ny taoniny dia nohavaozina avy amin'ny tatitra nataon'ny Komitin'ny Joint Army – Navy Assessment (JANAC), izay nilaza fa kely kokoa no nilentika an'i Tang.
Noho ny fanafoanana ny sambo mpiady kilasy Montana, Iowa no sambo mpitarika farany an'ny sokajin'adin'i Etazonia ary izy irery no sambon'ny kilasy nanompoany tany amin'ny Atlantika Atlantika nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Nanafatra: 1 Jolay 1939
mpanorina: NY Naval Yard
Napetraka: 27 Jona 1940
Ny sambo mpiady amerikana amerikana, USS Zumwalt (DDG 1000) no mpiady ambony indrindra sy mandroso indrindra amin'ny teknolojia manerantany.
Naorina teo amin'ny tokotanin'ny Umoe Mandal izy ireo. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 60 knot (110 km / h) farany ambony, ny corvettes kilasy Skjold no sambo mpiady haingana indrindra nitaingina tamin'ny fotoana nampidirana azy ireo.
Corvette kilasy Skjold.
Jereo ihany koa Ny fanontanianao: Iza no mpamokatra vy lehibe indrindra any Etazonia?
Topimaso amin'ny kilasy
Length: 47.50 m (155.8 ft) 44.3 m (145 ft) (Halavan'ny ondana)
andry: 13.5 m (44 p)
Drafitra: 1.0 m (3.3 p)
Ny USS New Jersey dia notendrena sy nesorina inefatra raha manana kintana mpiady 19 ho an'ny anarany.
Anarana: USS New Jersey.
Hafainganana ambony: knot 35.2 [40.5 mph na 65.2 kmph] [mpihazona World Guinness Record]
Hafainganana maharitra: knot 30 [34.52 mph na 55.57 kmph]
7 nov Desambra 2020
Tahaka ny sambo rahavaviny, Bismarck, Tirpitz dia nitondra basy lehibe niaraka tamin'ny basy 38-centimetatra (15 in) valo tao anaty fonenan-kambana efatra. Taorian'ny andiam-panovàna nandritra ny ady dia 2000 taonina no mavesatra noho i Bismarck, ka nahatonga azy ny sambo mpiady mavesatra indrindra naorin'ny tafika an-dranomasina eropeana iray.
Misy kilasy iray izay malahelo tsy eo amin'ny karazana sambo maoderina - ny ady. Tsy misy eto amin'ity firenena ity. … Ireo kandida hafa dia mety ho HMS Rodney sy Vanguard, sambonay mpiady farany sy lehibe indrindra, na dia nofenoina tamin'ny basy tamin'ny Ady lehibe voalohany ho tombontsoan'ny toekarena aza.
I Yamato (大 和) no sambo mpitarika ny kilasy fiadiany namboarina ho an'ny tafika japoney Imperial (IJN) taloha kelin'ny Ady Lehibe Faharoa.
Yamato sambo mpiady Japoney.
Voatendry: 16 Desambra 1941
Voadona: 31 Aogositra 1945
Lahatra: Sunk, 7 aprily 1945
Ny USS Missouri dia nofaritana ho toy ny sambo mpiady malaza indrindra namboarina hatrizay. Nantsoina hoe "Mighty Mo", i Missouri dia kilasy mpiady kilasy Iowa izay nahita ady tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, ny Ady Koreana ary ny Ady Golfa.
Jereo ihany koa Valiny haingana: Iza no orinasa mpanao fanorenana lehibe indrindra eto an-tany?
USS Montana (ACR-13), dia mpitsangatsangana kilasy Tennessee izay nanome adiresy mpanara-dia ny mpanatrika nandritra ny Ady Lehibe I, ary taty aoriana dia notononina anarana sy nohajaina indray i Missoula (CA-13) tao anaty sambo fitehirizana. USS Montanan (1913), dia sambo mpitondra entana nandritra ny Ady Lehibe I ary nilentin'i torpedo tamin'ny Aogositra 1918.
Fanontaniana: Inona ny endri-tsoratra lehibe indrindra?
Fanontaniana: Iza ny endri-tsoratra lehibe indrindra?
Inona no endritsoratra azo ekena lehibe indrindra ho an'ny taratasy?
Fanontaniana: Inona no ady lehibe indrindra taminay?
Inona no endri-tsoratra lehibe indrindra amin'ny taratasy?
Inona no endrika endritsoratra lehibe indrindra?
Inona no grizzly lehibe indrindra voarakitra an-tsoratra?
Nilaza ilay lahatsoratra fa ny orsa notifirina no “orsa grizzly lehibe indrindra hatramin'izay
Iza no fanjakana lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra?
Fanontaniana: Inona ny crane lehibe indrindra any Etazonia?
Fanontaniana: Iza no tahiry lalao lehibe indrindra eto an-tany?
Fanontaniana: Iza amin'ny sambo lehibe indrindra naorina?
Valiny tsara indrindra: inona ny biby lehibe indrindra teto an-tany?
Nanontany ianao hoe: Iza no mpihira manankarena indrindra eran'izao tontolo izao?
Iza amin'ireo trondro kely indrindra eto an-tany?